‘असल नियतले काम गरेको छु, गल्ती भए सहुँला बुझाउँला’ – हाम्रो प्रभाव
‘असल नियतले काम गरेको छु, गल्ती भए सहुँला बुझाउँला’
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा विभागीय काममा कुनै त्रुटि भएको भए बेहोर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ४ बुँदे स्पष्टीकरण लेख्दै उनले निजी र तुच्छ स्वार्थ पूर्तिका लागि सिंगो मानवजातिकै भविष्य दाउमा नराख्न अपिल पनि गरेका छन् । भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “ यो सङ्कटकालीन र विशेष अवस्था हो । यो आम चुनावको प्रचार अभियान होइन । जहाँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका विरूद्ध र एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारका विरूद्ध आरोप र प्रत्यारोप झैं सञ्चार माध्यममा छरपस्ट नहोऔं ।” उनले अहिले पार्टीभित्रका मत मतान्तरलाई सार्वजनिक बहस गरेर पार्टी र मुलुकको एकतालाई कमजोर बनाउने वेला नभएको बताएका छन् ।
“पार्टीको महाधिवेशन घोषणा भएको छैन । समयलाई पर्खौं,” उनले भनेका छन्, “मानव जाति, देश, समाज, पार्टी, परिवार र व्यक्तिको अस्तित्व रहने कि नरहने ? मानव सभ्यता नै समाप्त हुने हो कि ? भन्ने खतरा रहेको अवस्थामा निजी र तुच्छ स्वार्थका लागि आफ्नै भविष्यलाई दाउमा नराखौं ।” उनले आफू बाच्न र मानवजातिको रक्षा गर्न एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् । “जब ढुक्कसँग बाँचिन्छ तब कस्ले कसलाई कारबाही गर्ने हो गरौंला । नियतमा कुनै खोट छैन । असल मनसायले गरेका काममा भुलबस कुनै गल्ती भएको रहेछ भने सहुँला बुझाउँला,” उनले अन्तिममा आग्रह गरेका छन् ।
देउवाको प्रश्न–अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीमा किन ढिलाइ ?
एक साता लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको तयारी
बुङमती फर्सीडोलको इट्टा भट्टाका ६०० मजदुर र बिपन्न परिवारलाई लत्ताकपडा वितरण
चितवन वाइपासमा खतरा लेखिएको पोको भेटियो, बम हुनसक्ने प्रहरीको आशंका
प्रचण्ड माधब समूहको शक्तिप्रदर्शन आज
चर्च भवन भत्काइएको दृश्यले विश्वभरका ख्रीष्टियन धर्मावलम्बीको धार्मिक भावनामा आघात पुगेकोः डा. खनाल
पत्रकार सुजिता हमाल नगदसहित सम्मानित